Amanqaku ka-Anthony Bergs Martech Zone |
Amanqaku ngu U-Anthony Bergs
Anthony ngumphathi weprojekthi Ababhali Ngeyure nganye Apho asebenzisa amacebo ahlukeneyo kunye nawobuqu ukuthengisa ngokufanelekileyo amashishini abathengi bakhe. Ngaba akukho xesha okanye utyekelo lokubhala iphepha lakho? Nika inkonzo yethu yokubhala ngobuchule kwaye uvumele ubunzima buwe emagxeni akho! Siza kukugcinela iiyure zokudideka kunye noxinzelelo ngokwenzela umsebenzi wengonyama.
Iimpazamo ezi-5 eziphezulu zokuthintela ukuThengisa ngokuZenzekelayo
NgoLwesibini, nge-13 kaDisemba ngo-2016 NgoLwesithathu, uDisemba 14, 2016 U-Anthony Bergs
Ukuzenzekelayo kwentengiso yitekhnoloji enamandla amakhulu etshintshe indlela amashishini enza ngayo intengiso yedijithali. Yonyusa ukusebenza ngokuthengisa ngelixa inciphisa iintloko ezinxulumene nokuzenzekelayo ukuthengisa okuphindaphindiweyo kunye neenkqubo zentengiso. Iinkampani zabo bonke ubungakanani zinokuthatha izibonelelo zokuthengisa ezenzekelayo kwaye zongeze ngakumbi ukuhanjiswa kwazo kunye neenzame zokwakha uphawu. Ngaphezulu kwe-50% yeenkampani sele zisebenzisa i-automation yokuthengisa, kwaye phantse i-70% yabaseleyo baceba ukwenza njalo